आज यति धेरै सस्तियो सुनको मुल्य! – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > आज यति धेरै सस्तियो सुनको मुल्य!
admin November 28, 2020 November 28, 2020 बिजनेस, समाचार	0
काठमाडौं । यो साता नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो ट्रेण्डमा रह्यो । साताको पहिलो दिन ९४ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ साताको अन्त्यमा तीन हजार रुपैयाँले घटेर ९१ हजार तीन सय रुपैयाँमा झर्यो ।
एक साता अवधिमा चाँदीको मूल्यमा पनि प्रतितोला ४५ रुपैयाँको गिरावट देखियो । घट्दो मूल्य र विवाहको सिजन लगायतका कारणले सात महिनासम्म बन्द सुन बजारमा खरिद बिक्रीको चहल पहल बढेको छ ।
सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब ३५ प्रतिशतसम्म मात्रै व्यवसाय चलिरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
भाउमा उतार चढाव
आइतबार प्रतितोला ९४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको सुनको भाउ सोमबार पनि यथावत नै थियो । तर मंगलबार सुनको भाउ तोलामै एक हजार आठ सय रुपैयाँले घट्यो । सो दिन चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३० रुपैयाँले सस्तिएको थियो । बुधबार पुनः एक हजार रुपैयाँले सुनको भाउ सस्तो भएर ९१ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भयो ।
बुधबार चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोलामा पाँच रुपैयाँले घटेर ११ सय ७५ रुपैयाँ थियो । विहीबार स्थिर रहेको सुनको भाउ शुक्रबार भने तोलामा दुई सय रुपैयाँले सस्तिएर ९१ हजार तीन सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
सेफ्टी ट्याङ्कीमा निसास्सिएरैै गयो २ जनाको ज्यान!
साउदीमा पसिना बगाएर कमाएको सम्पति कु’म्ल्यार श्रीमति फ’रार भएपछि श्रीमान रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
कृष्ण ओली जस्तै पीडित बुद्धिमानलाइ सहयोग लिएर भेट्न पुगे भाग्य न्यौपाने – भिडियो हेरेर सेयर गराैं